အွန်လိုင်းမှ အခမဲ့စာအုပ်များ (Update) | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
အွန်လိုင်းမှ အခမဲ့စာအုပ်များ (Update)	Posted by mm thinker on January 1, 2013
Posted in: Book, e-Book.	Tagged: Book, e-Book.	39 Comments
မှတ်ချက် – အွန်လိုင်းကနေ စာအုပ်ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ဖို့ ရှာကြတဲ့အခါ ဒီပို့စ်ကို ရောက်လာကြတာကို ဘလော့ဂ်ရဲ့ Stats အရ သိရပါတယ်။ တကယ်တမ်း အွန်လိုင်း အခမဲ့ စာအုပ်တွေ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ဖို့ အတွက် ကျနော် Page တခု သီးသန့် ဖွင့်ပြီး အဲဒီမှာ အလျဉ်းသင့်သလို Update လုပ်ပေးနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပို့စ်ကို ရောက်လာခဲ့ရင် ဒီနေရာ (CLICK HERE) ကို ဆက်သွားပြီး နောက်ဆုံး ဖြည့်စွက်ထားတာတွေရှိတဲ့ Link တွေမှာ ဆက်လက် ဒေါင်းလုဒ် လုပ်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၁၈၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၅
Last Modified: 4th Jan 2013
← Code of Ethics	လဥ ကြမ်းညပ် သီအိုရီ →	39 comments on “အွန်လိုင်းမှ အခမဲ့စာအုပ်များ (Update)”
AUNG on September 17, 2013 at 10:10 am said:
Reply	Aung Htut on January 9, 2014 at 6:08 pm said:
Reply	Dei Wi Oo on February 27, 2014 at 12:17 am said:
Reply	Anonymous on December 24, 2014 at 3:22 am said:
Reply	နေဇော် on April 1, 2014 at 11:27 pm said:
ကွန်ပျူတာ သင်ခန်းစာ စာအုပ်တွေ မြန်မာလို – အင်္ဂလိပ်လို လေ့လာချင်တယ် ဘယ်မှာ တင်ထားလဲဟင် သိရင်ပြောပြပါလား
Reply	cemgmg on August 11, 2014 at 1:46 pm said:
ပို့​ပေးပါလား Sent from my Samsung Galaxy smartphone.
Reply	cemgmg on April 6, 2014 at 10:33 pm said:
စာကြည်တိုက် သွာစရာမလိုတော့ဘဲ အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရပါတယ် ၊ သာဓု သာဓု သာဓု
Reply	nay min on July 6, 2014 at 7:41 am said:
Reply	ညီညီထွန်းno on August 6, 2014 at 8:52 am said:
ရင်နင်အောင်မွှေး စာအုပ်လေး တင်ပေးပါဗျို့
Reply	chit on August 6, 2014 at 10:34 am said:
Reply	Yannaing aung on August 7, 2014 at 8:05 pm said:
Reply	Tharngal on September 27, 2014 at 3:29 pm said:
down လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် ပြော့ပကြပါလား
Reply	Anonymous on January 18, 2015 at 3:04 pm said:
copy paste လုပ်လိုက်လေ ကျမတောင်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်
Reply	Anonymous on October 20, 2014 at 2:59 pm said:
Reply	Anonymous on January 5, 2015 at 10:19 am said:
Reply	Anonymous on December 3, 2014 at 11:25 am said:
words of wisdom book lo chin par tal
Reply	Anonymous on December 17, 2014 at 12:11 pm said:
So　great. Very　wonderful.
Reply	Ki No on January 2, 2015 at 10:46 pm said:
Autodesk software တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေလိုချင်ပါတယ်။မြန်မာလိုရေးထားတာလေးတွေဆိုရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
Reply	Anonymous on January 13, 2015 at 11:03 am said:
Reply	Anonymous on January 30, 2015 at 9:20 am said:
Einstein biograpy မြန်မာ လို့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ဘယ်လို့ရှာရမလဲ့
Reply	psmmptt on February 16, 2015 at 11:12 am said:
I want to know with knowledge.
Reply	Htet Thu Aung on March 6, 2015 at 9:14 pm said:
ငါ့ဒိန်ခဲ ဘယ်သူရွေ့လဲ ရချင်တယ်
Reply	Anonymous on June 11, 2015 at 7:43 pm said:
Reply	Anonymous on August 12, 2015 at 12:06 am said:
Grade 11 textbook pdf web မရှိဘူးလားခင်ဗျာ လိုချင်လို့ပါ ရှိရင်လမ်းညွှန်ပေးကါအုန်း
Reply	Anonymous on August 21, 2015 at 9:25 pm said:
Reply	U Pyae Phyo Kyaw on October 2, 2015 at 1:30 pm said:
I want to know Grade 11 English Text Book Pdf .Please ….
Reply	Anonymous on October 20, 2015 at 11:05 am said:
br nyar lo chon pr tl
Reply	mg kaung on December 22, 2015 at 11:29 pm said:
ကျ​နော်​ ကို နတ်​ရွာမိုး ရဲ့ ဘဲဥ ဆိုတဲ့ စာအုပ်​​လေးတင်​​ပေးပါလား
Reply	khaingthazinlatt on January 7, 2016 at 4:52 pm said:
သူငယ်တန်းမှ ဒသမတန်းအထိ မြန်မာကဗျာများ လိုချင်ပါတယ် ဘယ်မှာရှာရမလဲရှင်
Reply	khaingthazinlatt on January 7, 2016 at 4:54 pm said:
Reply	Lin Thint on January 18, 2016 at 2:47 pm said:
Reply	Aung Nwe Htet on March 15, 2016 at 9:00 pm said:
Reply	သဇင် on May 1, 2016 at 5:18 am said:
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေ
Reply	Nai (@hhlynnnai) on June 15, 2016 at 12:10 pm said:
I would like to knowastory title as I can rememberalittle things in the story.
The man in the story isadisabled person, the girl isabeautiful one. They fell in love despite the fact that he is disabled. I though the girl is papawady at first.
It was the classic burmese story actually.
Can somebody named the title of the story or the name of that man?
Reply	minswe swe on July 18, 2016 at 2:11 pm said:
မြန်​မာစာ​ပေကို ခုလို​အော်​လိူင်း ​ပေါ်တင်​​ပေးတာ​ကျေးဇူးပါ
Reply	Anonymous on September 18, 2016 at 1:00 pm said:
Grade 11english textbook pdf လေးရှိရင် ကူညီပေးပါလားဗျာ
Reply	Me Me Kay Khine on October 5, 2016 at 1:00 pm said:
Reply	Anonymous on October 12, 2016 at 3:57 pm said:
တက္ကသိုလ်တင်မြင့်ရဲ့ စာအုပ်အဟောင်းလေးတွေ ပြန်ဖတ်ချင်ပါတယ်၊ ရှိတာလေး တင်ပေးပါခင်ဗျာ။
Reply	Pyae Phyo Aung on November 7, 2016 at 4:39 pm said:
အသစ်ထွက်ထားတဲ့စာအုပ်တွေ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာရင် PDF ရနိုင်မလဲခင်ဗျာ